EAS + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အဝတ်အစား Anti-ခိုးယူခက် Tag ကို, EAS + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အဝတ်အစားလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုခက် Tag ကို, 58KHz+UHF Clothing Anti-theft Hard Tag, 8.2MHz+UHF Clothing Anti-theft Hard Tag, AM+UHF Clothing Anti-theft Hard Tag, FM+UHF Clothing Anti-theft Hard Tag
EAS + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အဝတ်အစား Anti-ခိုးယူခက် Tag ကို, EAS + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အဝတ်အစားလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုခက် Tag ကို
EAS Store ကိုနှိုးစက် 58KHz+UHF Clothing Anti-theft Hard Tag, 8.2MHz+UHF Clothing Anti-theft Hard Tag, AM+UHF Clothing Anti-theft Hard Tag, EAS + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အဝတ်အစား Anti-ခိုးယူခက် Tag ကို, EAS + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အဝတ်အစားလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုခက် Tag ကို, FM+UHF Clothing Anti-theft Hard Tag
ပုံစံ: လေး + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF / FM ရေ + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Optional
ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို: EPC C1G2 (ISO18000-6C)
chip: ဂြိုလ်သား Higgs 3
EPC သိုလှောင်မှု: 96နည်းနည်း,480bits တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်
အကွာအဝေးကိုဖေါ်ထုတ်: လှိုင်းနှုန်းသည် UHF3~6လ
58kHz > 0.8မီတာ
8.2MHz > 0.8မီတာ
ဒေတာကို retention ကို:7နှစ်ပေါင်း
တည်မြဲခြင်း: 100000 ကြိမ်
အပူချိန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်: -20℃ ~ + 80 ℃
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -40℃ ~ + 80 ℃
အရောင်: အဖြူ, မီးခိုးရောင်, အနက်ရောင်, သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသော
EAS + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အဝတ်အစား Anti-ခိုးယူခက် Tag ကို, is 58KHz+UHF or 8.2MHz+UHF electronic tags, isacombination of anti-theft and management of super-hard tag, with EAS anti-theft alarm function, but also both have UHF tag management functions. The tag not only triggers the burglar alarm, but also sends back product information for the tracking management of clothing and other managed products. It complies with EPC C1G2 (ISO ကို 18000-6C) standards and operates at 860-960MHz (worldwide availability). Each tag hasaunique ID and stores user data. This tag can be recycled to save costs.
I am interested in your product EAS+UHF Clothing Anti-theft Hard Tag, EAS + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အဝတ်အစားလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုခက် Tag ကို
prev: EAS RF Motherboard, EAS transceiver အင်တင်နာအားလုံး-In-One ဘုတ်အဖွဲ့
EAS RF Motherboard, EAS transceiver အင်တင်နာအားလုံး-In-One ဘုတ်အဖွဲ့
58kHz Acousto သံလိုက် Anti-ခိုးယူဖျ Tag ကို
EAS Supermarket Anti-ခိုးယူ 8.2MHz ဖျ Tag ကို